Soomaali / Somali – Ahjolan Poikatyö
Shaqada Wiilka ee Ahjola iyo waxqabadka walaalka weyn
Shaqada Wiilka iyo doorka walaalka weyn ee Ahjola Setlementti waa shaqooyin lagu dhiiri galinayo qaab-galmeedka (sukupuolisensitiivinen) ilmaha iyo dhalinyaradda.
Waxqabadka Shaqada Wiilka ee Ahjola, waxa loogu talo galay wiilasha carruurta iyo dhailnyaradda ah iyo kuwa dareensan in ay leeyihiin qaab-galmeedyo badan (moninainen sukupuoli) ee da’doodduna u dhaxayso 10–17 jir ee Tampere ku nool ama dhigta iskuuladda Tampere.
Waxqabadka waxa ka mid ah
– Aqalka Wiilasha waa goob Pispa ku taala oo wax lagu qabto laguna wada kulmo. Aqalka Wiilshu wuxuu furan yahay iniinaha sacadaha 15–19.
– Kooxaha kobcinta iyo hiwaayadaha
– Waxqabadka fasaxyadda
Ilmaha iyo dhalinyarta 6–16 jir u dhaxaysaa waxay saaxiib ka heli karaan Waxqabadka Walaalka weyn oo waxay heli karaan walaal weyn oo saaxiib iyo taageer ka dhigtaan oo farxadda la qaybsadaan. Dhamaan kuwa iskaa wax u qabsiga uga shaqeeya Waxqabadyadda Walaalka Weyn, waxay soo mareen kooras, loogu tobobaray hawlahan.
Haddii aad rabto in aad waxqabdan ka qayb qaadato, buuxi warqadan dalabka ah. ku buuxi af-fiinish ama af-ingiriisi. Waxaan sidoo kale dalabka kula buuxin karnaa, markaad soo booqato goobta. Ku soo dhawoow waxqabadka!
Shaqada Gabdhaha ee Ahjola waxaad ka akhrisan kartaa boggan internetka www.tyttojentupa.fi.
+358 44 553 8432 (Hagaha shaqada Wiilsha)